Kudza - Shineon Technology Co., Ltd.
Shineon akasarudzwa seye 2013 red herring top100 yepasirese
SANTA MONICA, Calif. — DATE — Red Hering yakazivisa Top 100 Global yayo mukucherechedza makambani akazvimirira anotungamira kubva kuNorth America, Europe, neAsia nhasi, vachipemberera hunyanzvi hwekutanga uye matekinoroji mumaindasitiri avo.
Shineon akapihwa mubairo webhizimusi renyika repamusoro.
Mangwanani eKurume 16th, iyo 2019 Economic Work uye Technology Innovation Musangano yakaitwa naNanchang High-tech Zone Administration muhotera yeNanchang 28th yepakati chikoro chepamusoro-tech bazi. Musangano uyu waive nechinangwa chekunyatsoongorora uye kupedzisa iyo ...
2011 wepasi rose cleantech 100 mubairo
Kuti uwane mukana weGlobal Cleantech 100, makambani anofanirwa kuzvimiririra, kuita purofiti uye kwete kunyorwa pane chero chikuru stock stock. Gore rino, makambani zviuru mazana matatu nemakumi matatu nemaviri kubva kunyika makumi masere akasarudzwa, Shineon mumwe wavo. Maitiro ekusarudza anosanganisa dhata rekutsvagisa reCleantech Group nemitongo yehunhu kubva kusarudzo ...